FAQs - Handan Chuan Ding Qalabka Korantada Soosaarka Co., Ltd.
Ma tahay shirkad ganacsi ama soo-saare?
Waxaan nahay khabiir khibrad u leh soo saaraha qalabka korontada.
Ma bixin kartaa muunado?
Haa, waxaan ku bixin karnaa muunado bilaash ah, laakiin waxaad u baahan tahay inaad bixiso kharashka dhoofinta.
Qadarka lacag bixinta ayaa ka yar 10,000 USD, 100% kahor.
Lacag bixinta in ka badan $10,000 waxay u baahan tahay lacag hormaris ah oo ah 30% khidmadda xawilaadda siliga iyo baaqiga waxa la bixiyaa ka hor inta aan la rarin.
Lacag bixin ka badan $30,000 ayaa loo aqbalayaa warqadda credit.
Sidee buu yahay wakhtiga dhalmada?
Shaybaarada, wakhtiga dhalmada waa ilaa 7 maalmood.
Dufcadaha, haddii ay kayd tahay, waxay inta badan qaadataa 5 ilaa 10 maalmood si ay u aadaan dekedda.
Haddii aysan jirin kayd, waxay noqon doontaa 15-30 maalmood ka dib helitaanka deebaajiga, iyadoo ku xiran tirada.
Haddii ay tahay OEM ama ODM, waxaad u baahan tahay inaad samayso moodel, kaas oo inta badan qaata 25-35 maalmo shaqo.
Waa lagama maarmaan in si faahfaahsan looga hadlo sida loo raro ka dib marka la yimaado dekedda.
Sidee loo xalliyaa dhibaatada tayada iibka kadib?
Sawir ka qaad dhibaatada tayada oo noo soo dir kormeer iyo xaqiijin. Waxaan ku siin doonaa xal lagu qanco 3 maalmood gudahood.
Waa maxay baakaddaadu?
Iyada oo ku xidhan cabbirka nooca badeecadda, waxa aanu alaabta ku ridi karnaa bacaha oo ku ridi karnaa weelka, ama waxa aanu sidoo kale ka samayn karnaa astaanta macmiilka ee alaabta iyada oo la raacayo shuruudaha macaamilka.
Qiimahayadu way kala duwanaan karaan iyadoo ku xidhan sahayda iyo arrimaha kale ee suuqa. Ka dib markii shirkaddaadu nala soo xiriirto macluumaad dheeraad ah, waxaan kuu soo diri doonaa liiska qiimaha la cusboonaysiiyay.
Haa, waxaan u baahanahay dhammaan amarada caalamiga ah si ay u lahaadaan tirada ugu yar ee joogtada ah. Haddii aad rabto in aad dib u iibiso laakiin tirada ay yar tahay, waxaan kugula talineynaa inaad booqato macluumaadka xiriirka ee boggayaga.
Ma bixin kartaa dukumeenti khuseeya?
Haa, waxaan bixin karnaa dukumeentiyada intooda badan, oo ay ku jiraan falanqaynta/shahaadada shahaado bixinta, asalka caymiska iyo dukumeentiyada dhoofinta kale ee loo baahan yahay.
Waxaan dammaanad qaadaynaa agabkayaga iyo habraacyadayada. Ballanqaadkayagu waa inaan kaa yeelno ku qanacsanaanta alaabtayada. Waa dhaqanka shirkadeena in la xaliyo oo la xaliyo dhammaan arrimaha macaamiisha iyo in la qanciyo qof kasta, haddii ay tahay muddada dammaanadda ama haddii kale.
Ma dammaanad qaadaysaa keenista nabdoon ee alaabta?
Haa, waxaan had iyo jeer isticmaalnaa baakadaha dhoofinta tayada sare leh. Waxaan sidoo kale u isticmaalnaa baakadaha khaaska ah ee khatarta ah alaabta khatarta ah iyo rarida qaboojiyaha shahaadaysan ee walxaha xasaasiga ah ee heerkulka. Baakadaha xirfadlayaasha ah iyo shuruudaha baakadaha aan caadiga ahayn waxay keeni karaan kharashyo dheeraad ah.
Waa sidee qiimaha rarida?
Kharashka rarida waxay ku xidhan yihiin sida aad u dooratid inaad alaabta ku hesho. Express sida caadiga ah waa kan ugu dhaqsaha badan, laakiin sidoo kale habka ugu qaalisan. Dhoofintu waa xalka ugu fiican ee mugga sare. Qiimaha rarida saxda ah waxaa lagu siin karaa oo kaliya ka dib markii aan ogaano faahfaahinta tirada, miisaanka iyo habka. Fadlan nala soo xidhiidh wixii macluumaad dheeraad ah.